Sawirro iyo Warbixin:Hadalkii oogu Horeeyey ee Sh Xasan Daahir Aways iyo Wareysi Xasaasi ah.. - iftineducation.com
Sawirro iyo Warbixin:Hadalkii oogu Horeeyey ee Sh Xasan Daahir Aways iyo Wareysi Xasaasi ah..
iftineducation.com – Wareysigan oo warbixin badan ay ku dhex jirto ayaa noqonaya markii ugu horeysay ee Sheekh Xasan Daahir uu wareysi siiyo saxaafadda ama loo ogolaado in saxafiyiin uu la hadlo.
Weriye Michelle Shephard oo dhinaca ammaanka uga soo warrantay jariirada Toronto Star ayaa la kulantay Sheekh Xasan Daahir, waxayna sheegtay in kulanka uu dhacay intii uu talada hayay madaxweyne Obama oo aan la dooran madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo.
Xaaladda Xasan Daahir
Sheekha Xasan Daahir oo ka mid ahaa hogaamiyeyaasha Alshabaab intii aanu naftiisa kala soo baxsan sanadkii 2013 ayaa ku jira liiska argagixisada Mareykanka iyo UN-ka waxaana uu hore u banneeyay dilka dadka shacabka ah iyo ciidamada dowladda.
Xaaladda Xasan Daahir ayaa ah xabsi guri, wuxuu la nool yahay dhowr xaas iyo caruur gaareysa 28 qof. Wuxuu ka hadlay maxkamadihii islaamiga ahaa, kooxda Alshabab iyo sidii uu uga goostay kooxdii Alshabaab.
Wareysiga ayaa ahaa fursad si gaara loo siiyay saxafiyadan sanadkii hore iyadoo heshiis lagula galay inaysan daabicin, xilligas oo ay socdeen waanwaan lagu doonayo ina dowladda Qatar ay la wareegto Sheekh Xasan Daahir, taasoo markii dambe fashilantay.
Saxafiyadda ayaa sheegeysa in Sheekh Xasan Daahir dowladu ka gaabsatay inay maxkamad soo taagto ama dil lagu xukumo, taasoo ay ugu wacan tahay beesha weyn ee Habargidir oo uu ka soo jeedo.
Mowqifka Sheekh Xasan Daahir
Wareysiga lala yeeshay Sheekh Xasan wuxuu ku difaacay wixii uu ku kacay xilligii uu Xisbul islaam iyo Alshabab ka mid ahaa, mar la weydiiyay sababta uu dhaleeceyn waayay dilka dadka rayidka ah ayuu sheegay in dagaalku noocaas yahay oo dadka aan waxba galabsan ay ku dhintaan. Xilliga dagaalku lagu jirayna aysan saamaxeyn in wax la kala sooco.
Sheekh Xasna Daahir & Alshabab
Sheekh Xasan Daahir ayaa ku dooday inuusan ka mid ahayn Alshabab, laakiin uu ku xirnaa ama xiriir la lahaa. “Kama mid ahayn, laakiin waan ku taageeray… farqi ayaa u dhaxeeya inaad taageerto iyo inaad ka mid tahay.. waxay la dagaalmayeean caddowgeena, sidaas ayaan ku taageeray… falalkooda qaarkood lama qabin, kuma raacin..” ayuu yiri Sheekh Xasan Daahir.
Ma Hubi Inaan La Cayaari Doono Justin Bieber: Sunny Leone
Maxaa Ka Horeeya Galmada,Ninyahow Shaqada Hori Ha Ka Bilaben ee saan samey maraxyahow